भारद्वाज कृषि फार्म लोकल कुखुरापालनमा प्रख्यात – Radio Dadadar FM
Radio Dadadar FM
भारद्वाज कृषि फार्म लोकल कुखुरापालनमा प्रख्यात
Posted on May 18, 2020 by dadadara
(डाडादरा एफएम) बाबियाचौर, सुर्खेत ।
ब्य वसाय भन्दा जागिरे जीवन राम्रो लाग्ने युवा पुस्ता र निजामती कर्मचारीको लागी सुर्खेतका एक जोडीले गतिलो उदाहरण दिएका छन । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं २ घर भएका चुडामणि कडेल अहिले ब्यवसायमा र जागिरे जिवनमा ब्यस्त छन । बिहान साझ ब्यवसाय मा ब्यस्त कडेल दिउसो कार्यालयको काममा पञ्चपुरी नगरपालिका मा जाने गरेका छन ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं. २ पलैटेमा स्थायी घर भएका कडेलको निजामति सेवामा प्रबेश गरेको करिब ९ बर्ष पुग्यो । प्राय श्रीमान कार्यालयको काममा जाने र श्रीमतिले घरको काममा सघाउने परिवार भन्दा कडेलको परिवार भिन्न छ । कडेलको धर्मपत्नी सृजना आचार्य पनि पञ्चपुरीकै वडा नं २ को वडा सचिबको रुपमा काम गरिरहेकी छन । कँडेलले आफ्नै घरमा भारद्वाज कृषि तथा पशुपालन फार्म अन्तर्गत कुखुरापालन व्यवसायलाई अगाडी बढाएका छन ।
गाउँमा लोकल कुखुराको माग बढ्दो भएको कारण लोकल कुखुरापालन गर्न सुरु गरेको कडेलले बताए । लोकल कुखुरापालनको लागि सुरुमा ब्यवस्थापन र संरचना निर्माण गर्न १० लाख बढि खर्च भएको छ ।
कडेलको भारद्वाज कृषि तथा पशुपालन फार्ममा अहिले कुखुराको जातिमा कडकनाथ, साखिमी, दुम्सी, लेकाली लोकल गरी कडकनाथ १५० वटा र अन्य जातका २५० वटा कुखुरा रहेका छन । सुरुमा पाल्पा जिल्लाबाट कुखुरा ल्याएर पाल्न सुरु गरेका कँडेलले अब आफ्नै फार्मबाट कुखुराका चल्लाहरु उत्पादन गर्ने र आबश्यक परे अन्य ब्याबसायी लाइ पनि बिक्री गर्ने योजना बनाएका छन । पछिल्लो चरणमा कडकनाथ किन्न र खानको लागि पलैटे जानुपर्छ भन्ने स्थानिय को जनबोली रहेको छ । धेरंैजसो ले कडेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेको कुखुरापालन देखेर खानको लागि अर्डर गर्ने गरेका छन । अहिले कडकनाथ (कालो प्रजातिको) कुखुरालाई उहाँ घरबाटै जिउँदो कुखुरा रु १०००(एक हजार ) प्रति के.जी.को दरले र जिउँदो लोकल कुखुरा प्रति के.जी. रु ७०० (सात सय )का दरले बेच्ने गरेका छन । कडेलले सुरु सुरुमा त चल्ला हुर्काउनको लागि रातभर पनि नसुतेको अनुभब सुनाउछन ।
दम्पत्ती नै निजामती जागिरे भए पनि अफिस समय बाहेक बिहान–बेलुका कुखुराको कृषि फर्ममा समय बिताउने गरेका छन । कुखुराको लागि घाँसको जोहो गर्न आफ्नै जग्गामा ६, ७ रोपनीमा विभिन्न प्रजातिको घाँस रोपेको र आफ्नै जग्गामा धैरै प्रजातिको घाँस रोपेर मेसिनबाट धुल्याएर अनि कुखुराको चरणक्षेत्रमा मकै रोपेर, क्याल्सियम, सिद्रा माछाको धुलो, मकै र धानमा मिसाएर कुखुराको लागी आहारविहारको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन ।
लोकल कुखुराको उत्पादन प्रयाप्त नरहेकोले अहिलेसम्मबजारमा कुखुराको मागलाई धान्न नसकिएको अवस्था रहेको छ । कडेलले ब्यवसाय संगै लोकल कुखुरा भएको ठाउ भनेर पलैटे लाइ समेत चिनाएका छन ।
अधिकृत कँडेलले अहिले विभिन्न प्रजातिका लोकल कुखुरापालनबाट सबै खर्च काटेर मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेका छन । बेरोजगार भएर बिदेशमा जाने र कर्मचारी भएर जागिरको मात्रै भर पर्ने हरुका लागि कडेलले उदाहरणका रुपमा काम गरेका छन । जोस जाँगर र उत्साह भएमा स्वदेशमा पनि केही गर्न सकिने भएको हुदा स्वदेशमा काम गर्न कडेलले सबैलाइ आग्रह समेत गरेका छन ।
Posted in कृषि, प्रदेश, समाचार, समाज
निर्वाचन जितेका भन्दा पराजित पूर्ब संचार राज्य मन्त्री बिष्ट जनताको सेवा गर्दै ।
भारतमा रहेका प्रवाशी बाट बिपन्नलाई सहयोग
कोरोनाबाट बाँके र पर्सामा दुई जनाको मृत्यु
नगरपालिका काे लगानीमा पञ्चपुरी मा बिधुत उत्पादन हुदै
पुर्ब संचार राज्यमन्त्री बिष्ट जनता संग राेपाइ गर्दै
बावियाचौरको खमारीखोला लघु जलविद्युत गृह मा पहिरो जादा महिलाको मृत्यु
Copyright © 2021 Radio Dadadar FM. All rights reserved.
Designed by Aarush Creation